Contacts | Dryzone
Dry Zone Greening Department Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation Photo Note Dry Zone Greening Department Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation Photo Note Dry Zone Greening Department Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation Photo Note Dry Zone Greening Department Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation Photo Note Dry Zone Greening Department Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation Photo Note Dry Zone Greening Department Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation Photo Note
Four Main Tasks
အပူပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး ဦးစီးဌာနသည် စိုက်ခင်းတည်ထောင်ခြင်း လုပ်ငန်းကို အပူပိုင်းမိုးနည်းရပ်ဝန်းဒေသနေ ပြည်သူလူထုအား ထင်းလောင်စာ၊ တိုင်၊ မျော၊ လယ်ယာသုံးကိရိယာ များ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်၊ ဆည်/ ကန်နှင့် မြစ်/ ချောင်းများ၏ ရေဝေရေလဲဒေသများ ထိန်းသိမ်းရန်၊ တောင်စဉ်တောင်တန်းများ စိမ်းလန်းစိုပြည်လာစေရန်၊ ဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး ….
(c) Promotion on Utilization of Fuel wood Substitutes
All Visitors – 42
အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်​ရေး စိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်းအား နှစ်ရှည် ပြုစုပျိုးထောင်ထားရှိသည့်် ကြံ့ခိုင်သန်စွမ်းသည့် ပျိုးပင်ကြီးများဖြင့် ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းအမျိုးအစားခေါင်းစဉ်များဖြင့် နှစ်စဉ် စီမံချက် များချမှတ်၍ စိုက်ပျိုး​ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည် ….
နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲနှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ဌာနအကြီးအမှူးတို့၏ လမ်းညွှန် ချက် အရ စိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်းများ